Gada njengendlela isibonisi ezibukwayo kolwazi, sekuyisikhathi eside khona emlandweni waso, ke uye washintsha eziningana wamavukelambuso. Uma ezingaphezu kuka eminyakeni embalwa edlule, abakhiqizi ikakhulu wawalwela kungenzeka yokunikeza izici okusezingeni eliphezulu eziyisisekelo "isithombe", umncintiswano manje obuqinile phakathi imiqondo ezahlukene ukugcwaliseka idivayisi. izinhlobo Wanamuhla ngabaqaphi zihlukaniswa iqoqo nenqubo eziholela izinga hhayi kuphela isithombe, kodwa futhi khona interface yokuxhumana, amandla ukusebenza, imisebenzi nokunye ukusebenza.
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini esibukweni TV?
Uma uthi nhlá, Abaqaphi yesimanje amakhompyutha akahlukile TV. Okungenani, uma siqhathanisa onobuhle encane usayizi ofanayo, umehluko ngeke zinganakwa. Futhi nokho. Ngakho, uma i-TV yakudala - yidivayisi ezimele ukuthi ithola bese lidlala amasignali alalelwayo video kusukela ikhebula satellite iziteshi, qapha kuyinto ukucutshungulwa hardware kanye nokunikeza ulwazi sokuqhafaza, umthombo okuyinto ikhadi ekhethekile. Ngokuphathelene umehluko zangaphandle, basuke ngokucacile kakhulu eveza uhlobo qapha laptop, okungase emelelwa omunye matrices womndeni liquid crystal display. Ikakhulukazi, namuhla ifomethi evamile TN matrixes, le MVA kanye nokuthuthukiswa yesimanje kunazo - IPS. Kuqhathaniswa okufanayo TV amasethi, lezi amamojuli ukunikeza izinga ephakeme nemininingwane reflection kolwazi sokuqhafaza per unit endaweni kwesikrini.
Izinhlobo matrices yekhompyutha ekhombisa
I module oluyisisekelo, okuyinto onokulinganisela ukusebenza isakazeke kangaka kuyinto TN. Lolu hlelo luhlinzeka ezinhle isikhathi impendulo, okuyisilinganiso sabangu-ms 20 futhi ongaphakeme yokukhiqiza izindleko. Kodwa ngenxa ukusebenza umbala nekuphikisana ongaphakeme matrices enjalo nesizotha akuzona ziphoqa phakathi Ongoti esinokuqonda eliphezulu izithombe. Esikhundleni kangcono amadivayisi amamojuli kanye IPS TFT - qapha hlobo, okuyinto has a Ngokuphambene ehloniphekile, akusho ivelele enamaphikiseli ephukile futhi adlulisele elikhulu umbala ukukhiqizwa kabusha at engele okusezingeni eliphezulu wokubuka. Kodwa TFT module ezinguqulweni zanamuhla kuyabiza futhi kudinga ephakeme energy ukusetshenziswa.
Ukwahlukanisa ngohlobo Imininingwane kubonakala
Kunezinhlobo ezimbili imiqondo bahluke zokubonisa ulwazi esibukweni njengoba isithombe. It kubhekwa uhlelo zakudala nezinombolo, okuyinto luyasetshenziswa ku display, uhlamvu noma lokucubungula igama isignali. Phakathi kwalezi zilwane alo mkhaya ufanelwe ukuqashelwa okuthiwa qapha ohlakaniphile, wanika amakhono isihloko kanye pre-kucutshungulwa idatha etholakele. Eyesibili indlela ukuqopha ulwazi - Ihluzo, okuyinto, yona, futhi ngamaqembu amabili. Ikakhulukazi, kukhona vector kanye raster izinhlobo ngabaqaphi anezici zabo. Ngokwesibonelo, okukhiphayo kancane iphethini ibalwa njengoba isikhathi sokuba a zekhompyutha ihluzo ezifanele subsystem. Vector futhi ekhombisa kukhona ngaphezulu evame ukusetshenziswa kwe-radar, imishini slot nezinye izinto ukuthi akudingi izinga okusezingeni idatha reflectance isithombe.
Ukwahlukanisa ngohlobo isikrini
Imibhalo emidala kunayo yonke iyona ukuqapha esebenza ngokudla ngamapayipi cathode-ray. Lokhu izikrini CRT, okuyinto cishe ziphinde zenzeke emakethe. Traditional futhi yehlile zihlanganisa futhi LCD Abaqaphi. Kulokhu, kunezinhlobo ezahlukene LCD-Abaqaphi, egijima ku zinhlayiya ketshezi. Lawa-matrix efanayo esetshenziswa ukuhlomisa notebook - lamadolobha esimanjemanje kakhulu zihlanganisa IPS futhi TN + ifilimu amamojuli. Emndenini jikelele zesikrini eziphambili kakhulu inqubo LED kusekelwe ukukhanya diodes likhipha. onobuhle okunjalo ngabaqaphi unikeze izithombe eliphezulu futhi kwezinye izinguqulo zibonisa ezinhle kwagezi ikhono. isandiso nezobuchwepheshe eyinkimbinkimbi ngaphezulu lo mqondo kuyinto OLED-display, esebenzisa i ukukhanya organic likhipha diode hlobo.
Kulezi zinsuku, kunengqondo ukukhuluma ezimbili zama-interface, okuyizinto obanzi kunayo - kuyinto VGA Analogue and-HDMI uhlelo, okuyinto, nakuba akusito letinsha, kodvwa inikeza high quality ukudluliswa 'kwesithombe' umsindo. VGA port isivele ummeleli wokugcina interface analog. Against ngemuva kokusakaza-signal ke lags kahle ngemuva iziteshi digital izinga, kodwa isasetshenziswa ukuze silondoloze evamile ubuchwepheshe obusebenzayo ngokuya zokuxhuma. Kepha yocezuningi ke, eqinisweni, it is aguqulelwe ekhaya lisebenze esibonakalayo DVI-D, futhi yakhelwe ekucubunguleni multi-channel audio. Namuhla, le isixhumi kungenziwa umshini wokuphehla yiluphi uhlobo LCD qapha, kanye namaphrojektha, ne-plasma panel. Ukuze kufezekiswe uxhumano ngokusebenzisa lesi siteshi, kumele usebenzise i-yokwenziwa adaptha uhlelo DVI-D. Kumele kukhunjulwe ukuthi akubona bonke okukhiphayo analog ngisho kwakuthiwa uvumele ikhono ukuxhuma nge-HDMI futhi usebenzisa i-adaptha.
Ukwahlukanisa ngohlobo isiqophi
Noma yimuphi qapha idinga okokufaka signal processing ohlelweni. Lomsebenzi wenziwa ekuhumusheni obengeziwe isiqophi amakhadi, okuyinto Ukuvumela ukuxhumana amaningi ukucupha. Ikakhulukazi, ehlukile isiqophi ikhadi zidinga PCI noma nezixhumi AGP ngawo inikeza ukusebenza kahle eliphezulu nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa. Enye samuntu kuyinto yokuxhuma ihluzo iqembu core chip okuyinto linamathele phakathi PCB. Le isixazululo ushibhile futhi kuhilela enkingeni ngesikhathi ukusetshenziswa cha, kodwa alahlekelwe samuntu odlule ngokuya nekusebenta efanayo kanye nokusebenza. izinhlobo Wanamuhla ikhompyutha qapha ngokuvamile ifakwe ehlangene ye-adaptha yevidiyo agcwele. Lokhu kukhetha ngisho kancane, kodwa, futhi, akuvumeli esiphezulu ukuvulwa umthamo isignali okufakwayo.
Ukwahlukanisa uhlobo enamathela
Kukhona futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo ezinengilazi izibonisi - matte futhi ecwebezelayo. Inketho yokuqala muhle ngoba ayikuvumeli ukukhanya sigameko kubonakala, kodwa libhekene nenkinga yezinga eliphezulu umbala kancane. imodeli ecwebezelayo, ngakolunye uhlangothi, ukunikeza isithombe acebile futhi licace, kodwa ngenxa kuveza ukukhanya kungaba ungakhululekile ngokulandela okuqonda sibonwa. Ukuhlolisisa lezo zinhlobo Abaqaphi, ungakhohlwa mayelana ukunakekelwa usizo. Ngokwesibonelo, ku-surface matte akabashiyi emamaki namabala ezingeke ishiwo enamathela ecwebezelayo.
Abaqaphi ezisebenza imingcele ukuthola indlela kube bezibona okunethezekile "izithombe". Ngokuyinhloko kuyafaneleka lesinqumo, okuyinto izindlela zakamuva of 2560x1600. Umbala ukujula izocacisa ukuthi ayegcwele isithombe. Kwimakethe cishe ziphinde zenzeke imodeli ezinombala ofanayo, futhi nenguqulo imikhaya zokugcina okungenani matrix 32-bhithi. Cishe zonke izinhlobo esezingeni ekhombisa sokuqhuba imvamisa ku ezahlukene 60-100 Hz. Saneliswe ngokuthela kwezindebe le nkomba encishisiwe kulokolokoza lapho ukusakaza ezikhulisa induduzo phakathi kokubuka. Yiqiniso, izinto zomuntu kanye nosayizi qapha. Namuhla ungathola onobuhle melkoformatnye 17-20 amayintshi, futhi izikrini 30-40 amayintshi.
Indlela ukukhetha ukubonisa
Ngaphandle izici eziyinhloko ukuba ucabangele ukusebenza ukuqapha, Ergonomics yayo futhi ukutholakala izesekeli ezengeziwe. Njengoba ukusebenza imodeli zihlukile izilungiselelo ububanzi, ukuba khona ekhethekile yokusebenza izindlela, nezici ezikhethekile nokuningi operation eyonga amandla. D. Ukubheka ukuthi uhlobo olunjani qapha kuhamba phambili imisebenzi ethize, kuyoba engadingekile ukunquma futhi ekwenziweni esibonakalayo. Kulokhu, sikhetha indlela elula kakhulu ukwenza izilungiselelo efanayo - isibonisi imenyu noma esebenzisa Izilawuli mechanical emzimbeni. Njengoba for izesekeli ozikhethela, bona kakhulu ubheke tincenye lwemidlalo. I kangcono kubakaki, yokubeka kanye iphaneli nokugcinwa, enokwethenjelwa ngaphezulu kuyoba ukuzinza isakhiwo sonke.
Abaholi ingxenye kukhona abakhiqizi ezifana BenQ, ASUS, Dell, Samsung nokunye. D. Onjiniyela yalezi zinkampani kwenza babe hhayi kuphela ubuchwepheshe core ekuthuthukiseni izinga image, kodwa futhi ligxile imininingwane nokuxhumana ngabaqaphi nezinye izingxenye computer. Abasesigabeni esiphakathi kukhona ezingeni brand Hitachi, Supersonic futhi Philips. Ngaphansi brand of abakhiqizi ukukhiqiza zonke izinhlobo ezinkulu LCD Abaqaphi ukuba izindlela zakamuva phezu OLED platform. Futhi uma ezingeni lomhlaba zobuchwepheshe, lo mkhiqizo Ukuze kuveze izinkampani eziphambili oshiwo ngenhla ngokuya intengo it has inzuzo. Ngokwesibonelo, isilinganiso izici Philips qapha angathengwa ayizinkulungwane 10-12. Hlikihla., Ngenkathi efanayo yokusebenza nomai ukunikela ASUS BenQ abiza ecishe ibe yizinkulungwane 15-18. Ngesikhathi esifanayo, ethandwa futhi ephansi ekupheleni ingxenye, okuyinto uzame ukwethula design kanye amabhonasi abo, kanye nezinkampani elaziwayo elincane. Kuleli qembu ungathola amamodeli we ngabaqaphi esine ithegi intengo acishe abe yizinkulungwane 5-7.
Segmentation ngabaqaphi amaklasi nezinhlobo nokwethulwa ezintsha ziba eziyinkimbinkimbi futhi ungaqondakali. Kukhona subtypes e kumasegmenti ezibonakala ezimisiwe - LCD futhi LED-display. izinhlobo ezimbili ethandwa ukuthola ukushintshwa ahlukahlukene, wanika izici ezintsha futhi ngcono izakhiwo ergonomic. Ikakhulukazi, izinhlobo zanamuhla of ngabaqaphi Sekuyisikhathi eside kwi-interface digital, kancane kancane ukusekelwa yeluhlakasimo eside ye-4K ukudlala kaningi avele touch izinguqulo. Yiqiniso, lokho akusho, yima unganyakazi ngcono izimiso eziyisisekelo yokudala nabaqaphi. Kulesi sici, ngabomvu phakathi abakhiqizi izimbangela okunengqondo LED platform bese uqhubeke uhlelo lwayo OLED anabo tech yayo ukulungiswa.
Indlela hlola ikhadi isiqophi
Meningitis Serous: izimpawu ezinganeni, uphethwe, zokuvimbela
Lathe - imingcele futhi isicelo